बैशाखी टेकेर रबिलाई फूलमाला लगाइदिन बिहानैदेखी अदालत गेटमा पुगिन प्रहरीकै श्रीमती, (भिडियो) - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बैशाखी टेकेर रबिलाई फूलमाला लगाइदिन बिहानैदेखी अदालत गेटमा पुगिन प्रहरीकै श्रीमती, (भिडियो)
भिडियोमा देखिएकी यि महिला सुरक्षाकर्मीको श्रीमती हुन् । एकातिर रवि लामिछाने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा ११ दिन देखि बसीरहेका छन् । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिरहेको छ । तर उनै प्रहरीका श्रीमतीहरु भने रवि लामिछानेको समर्थमा उत्रिएका छन् , रवि लामिछानेको समर्थनमा निस्किएको र्यालीमा त्यस्ता थुप्रै महिला होलान् जुन सुरक्षाकर्मीका परिवारका सदस्यहरु छन् । एक जना महिला यस्ती छन् जुन रविका समर्थनमा अग्रपंक्तिमा छन्
आफ्नो नाम सरु बताउने यि महिलाको घर भरतपुर नै हो । उनी रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि नै चितवनमा भइरहेको रविको समर्थनको र्यालीमा दिनहुँ सहभागी हुन्छिन् । आइतवार रवि लामिछानेको दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिने भएकाले रिहा हुने आशमा फूलमाला लिएर आएकी सरु साँझ माला लगाउन नपाई फर्किइन्! रवि लामिछानेको थुनछेकको वहस सोमवार सुरु भएपछि उनी आज फेरी फूलमाला लिएर रवि लामिछानेको स्वागतका लागि उभिएकी छन् ।
उनले रवि लामिछानेको श्रीमतीका लागि पनि अर्को फूलको माला लिएर बसेको बताइन् । उनले रवि लामिछाने हिँजो आइतवार पनि फूलको माला लिएर बसेकी थिइन् । रवि सहित अस्मिता र युवराजको लागि पनि उनले माला ल्याएको बताइन् ! भिडियोमा हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ शारिरीक रुपमा अशक्त उनी वैशाखीमा टेकेर उभिरहेकी देखिन्छिन् । हिँजो उनले रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्ष पनि भेट्न पाएको बताइन् । रविलाई भेट्न उनी शौचालयको अगाडी गएर बसेकी थिइन् । रवि लामिछाने शौचालय आएर फर्केपछि उनले रविलाई बोलाएर नमस्ते भनेर बोलाएको बताइन् । अन्य समर्थकले भेट्न नपाउँदा पनि उनले भने प्रहरी कार्यालय भित्र प्रवेश पाएको बताइन् ।
पढ्नका लागि स्कुलमै गिटी कुट्दै बालबालिका !!
राति सुत्न भन्दा २ मिनेट अगाडी अनुहारमा यो लगाउने गर्नुस बिहान उठ्दा तपाई चकित हुनुहुनेछ (भिडियो हेर्नुस)
नेपाल भित्रियो डुकाटीको इलेक्ट्रिक स्कुटर, यस्तो छ मूल्य